Magaalada muqdisho oo maanta ka dhacayaan munaasabado lagu xusaayo maalinta calanka umada soomaaliyeed – STAR FM SOMALIA
Magaalada muqdisho oo maanta ka dhacayaan munaasabado lagu xusaayo maalinta calanka umada soomaaliyeed
Maanta waxa ay ku beegan tahay xilligii la sameeyay calanka Somaliya oo ay ka soo wareegatay 61-sano, iyadoo maanta Magaalada Muqdisho loogu dabaal degaayo 61 sano guuradii ka soo waregatay xilliga la sameeyay calanka Somaliya.
Munaasabad maanta ka dhaceysa Magaalada Muqdisho oo lagu wado inay ka qaybgalaan Masuuliyiinta dalka ugu sareysa ayaa loogu dabaal degayaa 61 sano guuradii ka soo wareegatay calanka Somaliya.
Inkastoo shacabka Somaliyed ahmiyad weyn uu ugu fadhiyo calanka, ayaa hadana sida ay hada wax u socdaan waxa ay u muuqataa in calanka Somaliya uu hoos u dhacay qiimahiisa, sababtoo ah Maamul Goboled kasta oo dalka ka dhisan calan gaar ah ayuu sameystay.
1.Xiddigta cad ee shanta gees leh waxaa ay ka tarjumeysaa Shanta qeybood ee dhulka Soomaalidu degto ka kooban yahay.
2.Midabka buluugga khafiifka ah waxaa uu ka tarjumayaa Cirka iyo badda dhulka Somaalida oo mar walba midabkoodu buluug yahay.
Qiimaha calanka uu leeyahay waxaa ka dharagsan qof waliba oo muwaadin ah.